Plasma Mobile yatove chokwadi | Kubva kuLinux
Plasma Mobile yatove chokwadi
Ndinofanira kutaura, ndinofara. Mazuva mashoma apfuura, kutarisa kufambira mberi kwe Plasma Mobile NePlasma Runhare chirongwa, ini ndakataura pane angu masocial network kuti Ubuntu aifanirwa kuisa mabhatiri, asi ini handina kumbofunga kuti Plasma Runhare rwaitove rwechokwadi uye munguva pfupi yakadaro yenguva.
1 Chii chinonzi Plasma Runhare?
2 Maitiro ekuisa Plasma Runhare maapplication
3 Kutora kwangu paPlasma Runhare
Chii chinonzi Plasma Runhare?
Mhinduro pfupi: KDE pafoni yako. Ndokunge, Plasma Workspace, KWIN / Wayland uye Telepathy tekinoroji kubata mafoni.
Maitiro ekuisa Plasma Runhare maapplication
Zvese izvi zvinomhanya paKubuntu, uko zvinoenderana nezvavanotiudza pawebhusaiti yavo, tinogona kuisa kunyorera zvisinei nekuti iGTK kana QT, neyakareruka:
Izvo zvinoshandiswa zvatinogona kuisa ndezvi:
Ubuntu Kubata (.click)
Gnome maapplication (ex: GnomeChess)
uye pamwe zvimwe zvichibva paQt seSailfish OS kana Nemo.
Sezvo zvine musoro, kuchine zvakawanda zvekuvandudza kumberi Plasma Runhare inobudirira kuve yakadzikama musiyano uchienzaniswa nenharembozha Operating Systems iyo yatove pamusika, asi inogona kutoyedzwa, hongu, izvozvi chete mune LG Nexus 5.
Sezvo ini ndiinayo, ndinogona kusarudza kuzviyedza gare gare, pandinayo akawedzera mamwe mashandiroNekudaro, kana iwe uri mumwe wevakashinga neNexus 5 iyo inoda kuzviedza, iwe unofanirwa kuenderera mirairo iyi.
Kutora kwangu paPlasma Runhare
Izvi zvinonakidza. Patakafunga kuti Android, iOS, Windows Foni, uye nezvimwe zvinowaniswa OS seSailfish, FirefoxOS kana Ubuntu Runhare ndidzo dzimwe nzira dzataive nadzo, dombo diki iri rinowoneka. Zve iOS ne Android pane zviri pachena kuti hapana kunetsekana, asi FirefoxOS uye Ubuntu Runhare vari kuva nenguva yakaoma.
FirefoxOS haisi kunyatso bvisa. Icho chaive zano rakanaka kwazvo iro rakange riine ratidziro yepakati, kunyanya nekuda kwekushayikwa kweApplications uye kusangana nehukama hwevanhu. Iyo inoshanda sisitimu inotamburira kurarama, asi zvinosuruvarisa ine zvishoma uye zvishoma kutarisisa, zvirinani mune vezvenhau. MuPlasma Mobile foramu mushandisi akabvunza kuti:
Izvozvi ini ndinoshandisa Firefox OS nekuti ndiyo yakanakisa nhare OS yandakasangana nayo kusvika zvino muhupenyu hwangu. Chii chinonzi Plasma Mobile chinondipa icho icho Firefox OS isingaiti?
Iye zvino ndinoshandisa Firefox OS sezvo iri yepamusorosoro nhare yekushandisa sviro yandati ndamboona muhupenyu hwangu. Chii chinonzi Plasma Mobile chinondipa icho icho Firefox OS isingaiti?
Mhinduro yacho yaive yakajeka:
Qt / C ++ uye QML native maapplication.
Qt / C ++ uye zvemo zvekushandisa muQML.
Uye ndinofanira kuti, mhinduro yakanaka kwazvo. HTML5 inovimbisa, inogona kunge iri nguva yemberi, asi nguva yangu yekushandisa Firefox OS yakandiratidza kuti haina kukurumidza sezvayakavimbisa.
Ubuntu Runhare saka ndotii? Ndakambozviedza, ndakazviona zvichishanda uye zvichitambura zvakafanana neFirefoxOS ... mashandisirwo emashandisirwo uye kushandiswa kunosiya zvakanyanya kudiwa. Kunyangwe zvakadaro, ndinofunga kune ramangwana kana vanhu veCanonical vakaita zvinhu nemazvo.
Zvino kunouya Plasma Runhare nechinonakidza chikumbiro, pasina kudzoreredza chero chinhu, uchishandisa tekinoroji inoonekwa uye inoshanda. Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kuti uise chero mhando yekushandisa zvisingaite kunyangwe iri Qt kana GTK, uye uchiona nhau dzichangoburwa dzeprojekti iyo KDE iri kuvandudza kumhanya Android zvishandiso natively, ini ndatoona pfungwa yezvose.
Ini handisati ndaverenga chero chinhu nezve kubatanidzwa kunoitwa neUbuntu Runhare uye izvo zvave kutoonekwa muOSX uye iOS, asi nekushandisa iyo imwecheteyo Plasma tekinoroji handifunge kuti hazvishamise kuona kufambira mberi mune izvozvi munguva pfupi.
Pane zvakawanda zviri kumberi, Plasma Runhare haina kukwana, inotoda kuona kwayo kubata-kumusoro, asi ini ndinokusiira vhidhiyo kuti uwane pfungwa yekuti mafambiro ari kuita zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Plasma Mobile yatove chokwadi
Ndiri kufarira kwazvo chirongwa ichi uye Sailfish, asi ini handina kuona nzira yekuvatumira kuLatin America kuti vayedze.
Iko hakuna makambani eLatin America anofarira kuisa mari muzvirongwa izvi… zvakare musika wechiLatin wakazvimiririra uye vanhu vanowanzo sarudza zvakabatanidzwa zveWindows, ios uye Android…
zvaunotaura zvakandiyeuchidza pakasvika FirefoxOS munyika yangu, yakashambadzirwa se smartphone yevana (yangu yekutanga smartphone).
Nhau dzakanaka sei idzi. Ndinoda plasma neKde. Ndinovimba inokura nekukasira, imwe yacho ingave inoenderana nekuita nekuda kwekusiyana kwemateminari
inotaridzika zvakanyanya senge yakasarudzika dura kune ubuntu foni. Zvingave zvakaiswa mune ramangwana mu ubuntu touch sezvo plasma yakaiswa mu ubuntu? zvingave zvakanaka.
Pindura kune snayder
Nhau dzakanakisa, paine dzimwe nzira dziripo, zvirinani. Ini handikwanise kumirira kuti zvimwe zveizvi zviuye kuLatin America. Zvido.
Vanhu ava vanogona kukwikwidza vakanangana neApple, BB neWindows Runhare pasina matambudziko, ivo vanongoda kufambisa machipisi avo zvakanaka, tichaona kuti izvi zvese zvakamira sei mune ramangwana 😀
Ubuntu foni ndiyo yakachipa kopi yeiyo iphone, mune ino KDE vhidhiyo ndakaona zvakafanana mifananidzo ...
HAVANA VANOGADZIRA MAGrafiki?, NEI VACHIFANIRA KUSHANDISA YAKAITWA IOS ICONS?.
Ubuntu foni haitaridzike kunge iphone, uye haina mabhatani uye zvakachipa haisi pfungwa yakadai
Uye iwo ma icon anoshandiswa neakajairwa kde iwo, imwe kana maviri kunze uko anotaridzika senge iwo ios iwo, ayo akateedzera iyo numix dhizaini zvakadaro.
Chero zvazvingaitika, ndeye alpha vhezheni, ivo vakatoratidza mitsva mitsva yavari kugadzirira kde, uye zvirokwazvo uchakwanisa kuzvishandura kana iwe usingavade.
Pamusoro pezvo, hazvindinetse ini kuti vanoteedzera zvimwe zvinhu kubva mukugadzirwa kweimwe nzvimbo, chaizvo nzvimbo dzeios uye android dzakanaka uye dzinonzwisisika, hazvidi kuti vagadzire pfungwa nyowani nyowani muchimiro sezvakaita ubuntu. Tichifunga kuti kde yaigara ichifarira yechinyakare desktop, hazvina kushata kuti vanoita zvakafanana mushanduro yavo yemafoni, iyo, nenzira, inogoneswa kwazvo uye inoyeuchidza nezve kde desktop plasma, ine kunyange iine madingindira akafanana, zvinoita kunge ichave nekubatana kwakanaka kwazvo.
Ndinovimba chaizvo kuti vanobudirira nekuti zvinotaridzika zvakanaka kwazvo. Ini ndinofungidzira kuti inoshanda pane ubuntu foni handiti?
Zvakanaka. mubvunzo, chii chakaitika kune inoshanda plasma? I think project iya yakaramba yakanyarara kana yatofa? Kunyangwe ini ndiri proKDE ndinofanira kutaura kuti yangu inotevera foni ichave jolla, sailfish inoshamisa. Ndiri kumirirawo iyo jolla piritsi randakatenga panguva yako croudfounding.
Kune vateveri ve KDE tinofara, asi ini ndinoona kure kure kune imwe yeavo mumaoko angu
asi uchirangarira kuti iwe unogona kusanganisa Android smartphone mu KDE, uye nekuona mameseji, kupfuudza zvinhu pane clipboard, uye zvimwe zvinhu zvakawanda, ndinogona kungofungidzira kuti zvingave sei neiyi OS nyowani, ini ndaigona kubheja kuti zvichave zviri nani pane izvo iOS zvainazvo uye OSX
Ini ndaizvida, ndinotarisira kuti vabudirira uye vatanga kuvaka chimwe chinhu senge isu tatova naro mu linux, asi ruoko.
Nenzira, ini ndakawana firefox isiriyo, chokwadi ndechekuti OS haina kunyatsondinakira, zvakanyanya maererano newebhu webhu
Kutaura chokwadi, chirongwa ichi chinotaridzika zvakanyanya kubata kupfuura Firefox OS (ichangotanga kubuda paPanasonic SmartViera TVs) uye Ubuntu Runhare (kusvika parizvino, handisi kuiona muLatin America).
Nezve iyo interface uye mamwe maturikiti, izvi zvinonyanya kukosha.
Yakanaka chirongwa 🙂 Sechinhu, chakavakirwa paUbuntu Runhare. Izvo zvandinoona zvakanaka, kuve KDE uye Ubuntu Runhare rwakavakirwa paQML inogona kungodzosera mabhenefiti pane ese ari maviri.
Endika Moreno akadaro
Ndiri kufara chaizvo. Ini handishandisi KDE asi ini ndinoda kutevedzera tsoka dzayo uye kuyedza ayo matsva maficha. Ndinoyemura izvi, asi ndinonamira kune yangu yemhando compiz mune arch. Kana zviri zvekuenderana neApple maapplication, hazvireve hazvo kuti zvinoita sekunge uine Android muKDE. Parizvino ini ndinoshandisa BlackBerry Passport iyo inomhanya isina matambudziko anenge ese maapplication eApple, asi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti pasina google masevhisi mazhinji eaya anoshanda haana kukosha zvakanyanya, uye ndinofungidzira kuti google ichagadzirisa masevhisi ayo kune mamwe maOS. Sekushandisa zvemo hapana kana chinhu uyezve KDE ingangoda rubatsiro rwakawanda kubva kumaapks ...
Pindura Endika Moreno
Zvinoreva here kuti izvozvi ndinogona kuva nesupertux paserura yangu? XD
Hapasisina kunyatsonaka zvakanyanya chirongwa chinorwadza kuti ini handina nexus asi mumaonero angu iri nani system kupfuura ios uye Android, ndinoreva kuti zviri nyore uye zvine hungwaru kubva pane izvo zvinoonekwa muvhidhiyo.
Chokwadi SuperTux ichauya kuApple kuburikidza neF-Droid, nekuti ini ndinofungidzira kuti ichasvika kuGoogle Play.
Wow! Chokwadi, chirongwa ichi chinonyanya kuitika kwandiri (sekutaura kwaEliot). Ndinovimba kuti kubva pano vanotizivisa kana paine kuwanikwa kwekutenga / kuwanda.
Kwazisai shamwari Elav, uye ndinokutendai nekugovana iyi yakanaka nhau! (Ini ndaisatomboziva)
Pindura kuna rainerhg7
Bruno cascio akadaro
Zvakanaka kutumirwa @elav!
Ini ndaida kupa nechimwe chinhu zvimwe chakanyanya kuwanda kupfuura kumisikidzwa
Kunyangwe iyo yakapusa uye inokurumidza nzira yekuverenga iyo paramende yekushandisa iri neyakarerekera, pamwe tinogona kuve vakaomarara uye toshandisa iyo "median" panzvimbo ye "mean". Chii chingatiponese kubva? Kuti iwo manhamba anoenda kuitira kana kubatana kwakadya yakawanda ndangariro. Semuenzaniso, ngatiti vatengi vanotevera vanoshandisa zvinotevera hunhu, muchikamu chendangariro chavanoda (KB, MB, MiB, nezvimwewo):
Ivhareji yaizopa approx ~ 30
Uye izvi nekuti isu tine mugumo wakakura kwazvo (150), uye kuverenga kwacho kupenga. Iye wepakati anoverengera kuraira idzi data, achigovanisa huwandu hwesampuli na2 (yedu yepakati) uyezve nekuwana nhamba yenzvimbo iyoyo. Nezvo isu tingave nechimwe chinhu senge
Saka zvatinoreva zvingave: 8/2 = 4 iyo iri ~ 10
Pano iwe unogona kuona kuti kunyangwe kupusa kwakanyanya kungave sei, kunogara kuchitipa kukosha kwechokwadi. Kana tikawedzera mutengi anoshandisa mazana maviri, median wedu anenge ari gumi nerimwe, nepo avhareji angaenda ku …….
Iwo unongova mupiro, uye unonzwisisika, nekuti nekubatana kwacho hakuna kukamurwa.
Vakambundira vanhu linuxera 🙂
Pindura Bruno Cascio
Iwe murume, kudzivirira hunhu hwakanyanya pane zvinhu zvakaita sejometri zvinoreva, kunyange hazvo chirevo chakayerwa chingashandiswawo kuitira kuti zviverengero zviri padyo nenhamba yezvikwata zvine chinzvimbo chakati, nezvimwe.
Izvo zvinoramba zvichionekwa kana kuri kugoverwa kwakadzikama, asi chokwadi ndechekuti KDE iri kuita rakanakisa basa mune ese matunhu ... Padanho rekushanda zvinoita kunge rakakwana; dambudziko richava rakafanana nenguva dzose: Izvo zvinoshandiswa. Chero ipi sisitimu inoshanda isina Whatsap (tingave tichida kana kwete icho chiri chechokwadi) haigone kukura kumwe chete sevamwe vavanokwikwidza navo. Kunyange zvakadaro, panguva ino ndinoiona ichinyatsozadziswa uye iine dhizaini chaizvo zvinoenderana nePlasma5, iine inogona kunge iri sisitimu ine zvakawanda zvekutaura nezvazvo.
Kana sailfish application ichigona kutakurwa panenge pasisina matambudziko newhatsapp, isu parizvino tine maappappapp maviri mujolla, imwe chete ichishanda zvakakwana.
muponesi maruva akadaro
Ndine sei mugadziri uye nekuisa pane yangu nhare mbozha.
Pindura kuSalvador Flores
Kana kde nharembozha uye kubuntu zvakabatanidzwa mune nhare yakananga, uye nedoko rinobatanidza hd kwariri, tarisa keyboard mbeva uye uine nhare nekombuta mune imwecheteyo kifaa
Zvinenge zviri kuisa linux distro 100% kubatanidzwa mune nhare uye kugona kushandisa nhare seBASE komputa, kana piritsi uye senhare
ino ndiyo ramangwana panofanirwa kuenda linux distros ... uye samsung yaunza vhezheni yayo, windows ine contniums ubuntu hwakawanikwa zvakashata ubuntu for andorid
asi ndinofunga kuti iri richava ramangwana chairo
Nhasi chero yepamusoro-yekupedzisira nhare ine simba rekufambisa distros 100% sekunge yaive yakajairwa komputa .. kushandisa doko kuisa zvigadzirwa uye kugona kuzvishandisa seBASE komputa, kuongorora, hd, keyboard kana mbeva ethent purinda
irudo rudo rwekuona iyo yekupedzisira vhezheni uye kuti inogona kuiswa mune yakakura kwazvo nhamba yemhashu kana zvichibvira mune zvese ...
Pindura kuna nolgan
Nzira yekuwedzera sei PPA zvinyorwa muDebian